अब घरमै बसी बसी आइपिओ बेच्नुहोस : यस्तो छ सजिलो तरिका – Enepali Samchar
अब घरमै बसी बसी आइपिओ बेच्नुहोस : यस्तो छ सजिलो तरिका
March 8, 2021 adminLeaveaComment on अब घरमै बसी बसी आइपिओ बेच्नुहोस : यस्तो छ सजिलो तरिका
e nepaalisamchaar /नेपालमा पछिल्लाे समय शेयर मार्केटमा लगानीकर्ताहरूकाे आकर्षण बढ्दै गएकाे छ । शेयर मार्केटकाे पुँजी र नयाँ कम्पनीहरूकाे आगमनसँगै बजार पनि ठूलाे बन्दै गएकाे छ।
लगानी डुब्ने जाेखिम कम हुने तथा लगानी नै सानाे हुने भएकाले शेयर बजारकाे दाेश्राे बजारभन्दा प्राथमिक बजार बढी आकर्षित हुँदै गएकाे छ । पछिल्लाे समय आइपिओ खुलेकाे महिला लघुवित्तमा करिब १५ लाखभन्दा बढीले आवेदन दिएकाे रेकर्डबाट पनि नेपालमा प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताहरूकाे चाप देख्न सकिन्छ ।
हाल अनलाइनबाट नै शेयर खरिद बिक्री गर्न मिल्ने भएपछि शेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूकाे भीड बढ्न थालेकाे छ । घरबाट नै शेयर किन्न तथा बेच्न मिल्ने भएपछि गृहिणी तथा विद्यार्थीहरूकाे पनि यसमा आकर्षण बढ्दाे छ । विदेशबाट समेत शेयर बजारमा काराेबार गरिरहेका लगानीकर्ताहरू देखिन थालेका छन् । यही सन्दर्भमा कतिपय लगा…
धेरै लगानीकर्ताहरू लगानीकाे प्रतिफल कसरी प्राप्त गर्ने अर्थात आइपिओ कसरी बेच्ने भन्ने कुराकाे जानकारी नभएकाले यसकाे समाधान खाेजिरहनु भएकाे छ । हामीले याे लेखमार्फत नेपालमा आइपिओ कसरी दाेश्राे बजारमा बेच्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिने प्रयास गरेका छाैँ । आउनुहाेस लेख सुरू गराैँ
प्राथमिक बजारमा तपाइँलाइ परेकाे आइपिओ बेच्न दाेश्राे बजारमा जानुपर्ने हुन्छ । जहाँ प्रवेश गर्नका लागि ब्राेकर अकाउन्टकाे जरूरत पर्दछ । हाल ब्राेकर अकाउन्ट अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट लिन सकिन्छ । याे लेखमार्फत तपाइँहरूलाइ ब्राेकर अकाउन्ट अनलाइनबाट कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिने छाैँ ।
नेपालमा हाल ५९ वटा सूचीकृत ब्राेकर अफिस रहेका छन् । Nepsetms.com मा गएर तपाइँले ब्राेकर अफिसहरूकाे लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ । कुन ब्राेकर अफिस कति नम्बरकाे हाे भन्ने जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ । जसमध्ये तपाइँलाइ जुन ब्राेकर अफिसमा अकाउन्ट खाेल्न पर्ने हाे उक्त ब्राेकर अफिसकाे वेभसाइट ( जुन नेपाल धिताेपत्र बाेर्डले उपलब्ध गराएकाे हुन्छ । ) मा गएर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि यदि तपाइँलाइ ५० नम्बर ब्राेकर अफिसमा अकाउन्ट खाेल्नुपर्नेछ भने नेपाल धिताेपत्र बाेर्डले ५० नम्बर ब्राेकरलाइ उपलब्ध गराएकाे वेवसाइट tms50.nepsetms.com.np मा गएर न्यु रजिस्टर बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा ध्यान दिनपर्ने कुरा केछ भने तपाइँले क्लिक गरेकाे ब्राेकर अफिसकाे टिएमएस सिस्टम वेभसाइटमा रजिस्टर बटनमा क्लिक गरेपछि आउने डिस्प्लेमा डकुमेन्ट बटनमा क्लिक गर्दा त्याे डिस्प्ले खुलेन भने उक्त ब्राेकरले अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्दैन । आफैँ उपस्थित भएर मात्र टिएमएस अकाउन्ट खाेल्नुपर्ने हुन्छ ।
विप्लवको छापामार शैलीमा इन्ट्रि, अब के होला ? (भिडियो विश्लेषण सहित )
सूर्य चिह्न खोस्न गएका प्रचण्ड आफैं ‘भष्म’ ! यी पूर्व माओवादीहरू ओलीमै विलय, चौतर्फी घाटा नै घाटा
आफ्नो मोबाइल फोनको पासवर्ड वा प्याटर्न बिर्सिनुभयो ? यसो गर्नुहोस्
दक्षिणकालीको दर्शन गर्दै जान्नुहोस् तपाईँको आज ग्रह दशा भाग्य र राशिफल